စောမဏ္ဍိုင် ရဲ့ Gipsy Dream
မှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ
Chatroom လေးမှ မဟုတ်တာ
» မူလသို့ » ကဗျာ » ဟိုဟို ဒီဒီ » ဟာသ
ငါ့ ရင်ခုန်သံတွေနဲ့ ယှဉ်လို့
မှတ်ချက်။ ။စာဖတ်သူ ဆဒ္ဒအတိုင်း ကဗျာခေါင်းစဉ် သတ်မှတ်နိုင်သည်။ :P ♥ မဏ္ဍိုင်
ရှောက်ဖောသူ မဏ္ဍိုင်ကြီး at 2:26 PM5စာဖတ်သူက ဆိုတယ်
ဖြစ်နိုင်ခဲ့ရင် ၀ဲ ပစ်ပါရဲ့
ရင်ခွင်ပိုက် ထွေးပွေ့ရလွန်းလုိ့။ ♥ မဏ္ဍိုင်
ရှောက်ဖောသူ မဏ္ဍိုင်ကြီး at 3:00 PM4စာဖတ်သူက ဆိုတယ်
မှတ်ချက်။ ။ပညာရှိများသာ တွေ့လတ္တံ့ :P
ရှောက်ဖောသူ မဏ္ဍိုင်ကြီး at 4:34 AM3စာဖတ်သူက ဆိုတယ်
ဇူလိုင်လ (၁၆) ရက်နေ့ ၊ မော်စကိုမြို့MSU (Moscow State University) ကျောင်း ကျောင်းသားဆောင်မှာ အမှတ်တရ ဆုံတွေ့ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီ တွေ့ဆုံပွဲမှာ ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းတွေဟာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အပြန်အလှန် အကြံပေး ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး ၂၀၀၈ ၊ ဧပြီလ ၄ ရက် ( သင်္ကြန် အကျနေ့ ) က အကြမ်းဖျဉ်း ရည်ရွယ်ထားခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အမှတ်တရ Website တစ်ခုလုပ်မယ့် ကိစ္စကို အတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ Website မှာပါမယ့် ကဏ္ဍတွေမှာ တာဝန်ယူနိုင်ကြမယ့် အပိုင်းတွေကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
နောက်တစ်နေ့ ( ၁၇ ဇူလိုင် ၂၀၀၈ ရက်နေ့ ) ဟာ ၀ါဆိုလပြည့်နေ့ ဖြစ်တဲ့အား လျော်စွာ ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်း Blogger တစ်စုဟာ MSU ကျောင်း ဘုရား ခန်းမှာ ဓမ္မစင်္ကြာတရားတော်ကို ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခဲ့ကြပြီး အခုလို နေ့ထူးနေ့မြတ်မှာ ကျွန်တော်တို့ ချစ်တဲ့ မြန်မာ ပြည်သူပြည်သားအပါင်း ကိုယ်၏ချမ်းသာခြင်း (သုခိနောဝ) စိတ်၏ ချမ်းသာခြင်း (ခေမိနောဝ) အပေါင်းနှင့် ပြည့်စုံပြီး ဘေးရန် အပေါင်းက ကင်းဝေးပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်း တောင်း ခဲ့ကြပါတယ်။ နေ့ လည်ခင်းမှာတော့ အမှတ်တရ ခရီးအဖြစ် ( Коломенский Парк) ပန်းခြံနဲ့ ဟိုချီမင်း ရင်ပြင်တို့ကို သွားရောက် လည်ပတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းတစ်စုရဲ့ တွေ့ဆုံပွဲကို နိုင်ငံအသီးသီးမှာ ရှိကြတဲ့ ကျွန် တော်တို့ရဲ့ Blogger ညီ ၊ အစ်ကို ၊ မောင် ၊ နှမများအားလုံး သိရှိစေဖို့ ၀မ်းသာ စရာ သတင်းကောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော် တို့ရဲ့ တွေ့ဆုံပွဲလို နိုင်ငံအသီး သီးမှာရှိကြတဲ့ Blogger ညီအစ်ကို ၊ မောင် နှမများလည်း ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ ဆုံတွေ့နိုင်ကြပါစေလို့ ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်း Blogger တစ်စုက ဆန္ဒပြုလိုက်ပါ တယ်ခင်ဗျာ။ Blogger များ အားလုံးနဲ့ Blog စာဖတ်သူများအားလုံး ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာ ချမ်းသာကြပါစေ …….
ကိုရင်ညိန်း ၊ တင့်ထူးရွှေ ၊ နတ်သျှင်နောင် ၊ Black Dream၊ မောင်ကောင်းအောင် ၊ လွမ်းလုင် ၊ မျှားပြာ ၊ ရွှေရောင်ကောင်းကင် ၊ လင်းထွန်း ၊ လွမ်းသုခ ၊ ရတ်မွန် ၊ နေချိုအေး ၊ ၀ဿန်ဦး ၊ မောင်နိုင် ၊ မီးပြတိုက် ၊ ဇွတ်ဆိုးလေး ၊ 4Ever ၊ ထိပေ့ သျှင် ၊ ကိုစွမ်း ၊ ကိုအောင် ၊ ညိမ်းညို ၊ ဖြိုးငယ် ၊ အောင်ဦး ၊ နန်းထိုက်ဝင်း ၊ မင်း ဝေ ၊ တင်နွယ်မောင် ၊ သုခရိပ် ၊မင်းကျန်စစ် ၊ အလွမ်းရောင် ၊ စောမဏ္ဍိုင် ၊ အညာသားလေး ၊ မောင်ငယ် ၊ မောင်သုည ၊ လွမ်းစေ (မြန်မာပြည်) ။
ရှောက်ဖောသူ မဏ္ဍိုင်ကြီး at 11:38 PM0စာဖတ်သူက ဆိုတယ်
ငါ့ရဲ. ဦးတည်ရာ အရင်က
လမင်းက တဆင့် ငါသိချင်လိုက်တာ။
မေ့မရတဲ. အတိတ် တွေနဲ.အတူ
မင်းကို ငါ တမ်းတနေဦးမှာပါ။ ♥ သူငယ်ချင်း
ရှောက်ဖောသူ မဏ္ဍိုင်ကြီး at 5:53 PM 1 စာဖတ်သူက ဆိုတယ်
မ ယုံရဲ့လား ?
မ အတွက် လေးနက်ခြင်းတွေရှိတယ်
မ သိရဲ့လား ?
မထီမဲ့မြင်နဲ့ လောကကြီးအတွက် ကဗျာမဆန်တဲ့
မ အတွက် နူးညံ့တဲ့ သံယောဇဉ်တွေရှိတယ်
မ ထင်ရဲ့လား ?
မ အတွက် လွမ်းဆွတ်ခြင်းဆိုတာတွေ ပြည့်နှက်နေတယ်
မ မြင်နိုင်ရဲ့လား ?
မ အတွက် အလိုက်သိမှုတွေ အပြည့်ရှိတယ်
ပြင်းထန်တဲ့ မာနတွေရှိတယ် ♥ ရန်လင်းအောင်
ရှောက်ဖောသူ မဏ္ဍိုင်ကြီး at 5:00 PM0စာဖတ်သူက ဆိုတယ်
ကိုယ်ပေးသလောက် ပြန်မရတာ အချစ်တဲ့… ♥ ရန်လင်းအောင်
ရှောက်ဖောသူ မဏ္ဍိုင်ကြီး at 4:35 PM0စာဖတ်သူက ဆိုတယ်
ဟေ့ မြန်မာဟာ မြန်မာပဲ။
ဘယ်တော့မှ စိတ်မကူးလေနဲ့။ ♥ ဦးသန့်
creade your account
Я အကြိုက်ဆုံး သီချင်းများ
၀င်ရေးသွားပါအုံးလား လော ကွတ်လုပ်တာနော်
ရောင်းရင်းတွေရဲ့ blog များ
» တင်ထူး ရွှေ
» ဖေဖော်ဝါရီ စာစုများ
» ကျွန်တော့် ကျွန်တော်
အခြားဝင်ကြည့်ဖြစ်သော blog များ
» ကို phozin
» အစိမ်းရောင် မိန်းကလေး
» နတ်သမီးလေးရဲ့ ပုံပြင်
ကျွန်တော်အခုတင်ထားသော စာအုပ်တွေ ကတော့ ချယ်ရီသစ္စာမှ စာအုပ်တွေ ဖြစ် ပါတယ် » မြန်မာဆိုရိုးစကားများ
» အထီးကျန် နှလုံးသားများပိုင်ရှင် ဘုရင် မ (Dr လွှမ်းမိုးဟန်)
» သိပ္ပံနည်းကျ အိမ်ထောင်သည် ဘ၀(Dr မောင်မောင်ညို)
» အမေရိကန် သမ္မတတို့ရဲ့ ဟာသများ (ခင်မောင်တိုး)
» မုန်း၍မဟူ(ဂျာနယ်ကျော် မမလေး)
» ဂျစ်ပစီ တစ်ယောက်ရဲ့ ရင်ကွဲပတ်လက် လမ်းဆုံ (မင်းခိုက်စိုးစံ)
» စိုမှာစိုးလို့ မိုးမိတယ်(မင်းခိုက်စိုးစံ)
» ကိုးမရှိတဲ့ န၀င်း(တာရာမင်းဝေ)
» ကိုယ့်လက်နဲ့ဖမ်းတဲ့ နဂါးငွေ့တမ်း (တာ ရာမင်းဝေ)
» ကြယ်မြင် လမြင်(တာရာမင်းဝေ)
» ကြယ်ကိုးစင်းနဲ့ လင်းတဲ့ ကောင်းကင် (တာရာမင်းဝေ)
» ကျွန်တော်နဲ့ ကြေးသွန်းရုပ်ကလေးများ (တာရာမင်းဝေ)
» html မြန်မာ စာအုပ်လေးပါ
၀င်ဖြစ်သော forum & web များ
» မြန်မာအိုင်အာစီနှင့် မြန်မာစကားဝိုင်း
» သတ္တမနည်း ပညာရပ်ဝန်း
» Myanmar Training
» Hit Ting
» ပေါ်ပြူလာ မြန်မာ
» Eleven journal
» လူငယ် ဒိုင်ယာရီ
ကျွန်တော့် နာမည်ကတော့ စောမဏ္ဍိုင် ပေါ့ဗျာ။ သူငယ်ချင်း တွေရဲ့ကူညီမှုနဲ့ ဒီဘလော့ခ်ကိုရောက် လာတာပါ။ ထူး ဆန်းတဲ့ အချက်က ရောက်တဲ့နေ ရာ မှာပျော်အောင် နေတက်တယ်။ သူငယ် ချင်းတွေ ကိုနောက်ပြောင်ရတာ ၀ါသနာ ကြီးတယ်။ အပေါင်းအသင်းကို ပိုပြီး ခင် မင်တယ်။ သူငယ်ချင်းတွေပါရင် ဘုန်းကြီး ကျောင်းဆိုလည်း လိုက်တယ်။ တစ်ခါ တစ်လေပြော တာနော်။ မမြဲတမ်း လာ ခေါ်မှာစိုးလို့။ အရမ်းခင်သွားပြီး ဆိုရင် သူငယ်ချင်းတွေ ဆီမှာ ထမင်း လိုက်စား တယ်။ ကျွန်တော်ဆီ ဆိုရင် တော့ ရှောင် ပြေးတယ်။ ဟီး စတာနော်။ မခင်တော့ပဲ နေမှာစိုးလို့။ ဒီလောက်ပါ ပဲဗျာ